Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Igwe ikuku mmiri wakporo Fiji, Tonga na Mauritius
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Akụkọ Fiji • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • News • Mgbasa Ozi • Resorts • Safety • Tonga Na -agbasa Akụkọ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Cyclones nọ na mwakpo na Pacific na Indian Ocean. Otu onye nwụrụ na Fiji na otu onye na-efu ka ajọ ifufe mmiri nke Sarai meriri mba ahụ na oke ifufe na oke mmiri ozuzo taa ma megidere ihe ndị ọrụ ihu igwe nke mba na-atụ anya ya.
Jilọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mberede Ọdachi nke Fiji kwuru na otu onye nọ na nlekọta siri ike na ihe karịrị mmadụ 2,500 akwagala na ebe 70 maka mgbapụ.
Oké ifufe ahụ na-aga n'ebe ọwụwa anyanwụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10 km / h ma atụ anya na ọ ga-abanye na mmiri Tongan na Tuesday.
Tonlọ Ọrụ Ihu Igwe nke Tonga nyere nnukwu mmiri ozuzo na ịdọ aka ná ntị idei mmiri maka mba ahụ dum.
Ka ọ dị ugbua n'oké osimiri India, Mauritius na-akwado Cyclone Calvinia. Issuedka asɛm a ɛwɔ kratafa 3 no ho asɛm n ’elekere iteghete nke ụtụtụ oge ịchụpụ ụgbọ elu niile na-aga na Mauritius.
N'ihi afọ ọhụrụ oge hotels na-gbaa akwụkwọ na ndị njem nleta.
Ndị ọchịchị nyere akwụkwọ ozi a maka Mauritius: “N'ime awa ole na ole gara aga, ajọ ifufe na-efe n'oké osimiri nọgidere na-anọchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 120 n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Mahebourg na nso nke ogo 20.7 na ndịda na 58.5 ọwụwa anyanwụ. Ọ na-aga n'ihu na-esiwanye ike ma na-aga n'ihu n'ebe ọdịda anyanwụ ga-eme ka etiti ahụ dị nso na Mauritius.
Ọnọdụ Cyclonic, nke ahụ bụ ikuku ikuku nke usoro nke 120 km / h, nwere ike ime na Mauritius site n'ehihie ụtụtụ.
Igwe ojii na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na CALVINIA ga-anọgide na-emetụta ihu igwe n'elu Mauritius.
Ihu igwe ga-ezo. Mmiri ozuzo ga-adịkarị oke ma ọ dị arọ mgbe ụfọdụ na égbè eluigwe. A ga-enwe ọtụtụ mmiri mpaghara na idei mmiri. A gwara ndị mmadụ na Mauritius ka ha mezue nlezianya niile. Oke osimiri ga adi elu. Enweghi ike itinye aka na oke osimiri.
A obodo tweet na-akọ banyere ọgụ na-eme achịcha: The tweet kwuru, sị: “BNdi mmadu echedoro ma nke kachasi mkpa Nwee obi oma ma lezie anya maka ndi agadi na anumanu! Hụ ọgụ na ebe a na-eme bred. Air Mauritius ga-ewepụta nkwupụta maka arụmọrụ ndị fọdụrụ n'oge ya, mana ebe nrụọrụ weebụ ụgbọ elu dị ka ozi oge ochie na-egosi ụgbọ elu na-ahapụ n'ehihie Mọnde.
Dabere na eTN isi mmalite, ịdọ aka ná ntị ụdị 3 bịara na-atụghị anya na ọ na-akpata nsogbu nro okporo ụzọ maka mba agwaetiti ahụ. Ndị mmadụ hapụrụ ọrụ n'ụtụtụ naanị na-eche ụdị ọnọdụ 2. Mgbe ekwuputara ịdọ aka na ntị dị elu puku iri rutere n'okporo ụzọ ịla.
Mauritius nwere nchekwa dị mma maka Cyclones. Ọ gụnyere akụkụ dị mma a na-atụ anya ya, yana maka ụlọ nkwari akụ na ebe ntụrụndụ.
The Nzaghachi Ọsọ sistemụ nke African Tourism Board nọ na njikere wee gwa ya Njikwa ike njem njem ụwa na njikwa nsogbu